Ichave inonyudza Apple Watch | Ndinobva mac
Iyo isina mvura Apple Watch?
Kunyange chiri chokwadi kuti pavakapa Apple Watch munaGunyana gore rakapera, zvakanzi mudziyo uyu yaigona kumira nemvura asi iine painogumira, Apple's CEO anoita kunge akasimbisa parwendo rwake kuenda kuGerman izvo iyo nyowani inopfekedzwa inomira kupfuura zvakajairika kuputika kwemvura. Mutungamiri mukuru akatsanangura izvozvo haabvisi wachi yake kunyange kugeza uye nekujekesazve izvozvo kuchaja smartwatch yako husiku hwese.
Izvi zvinogona kupokana uye hongu zvinogona kunge zvakakonzerwa nekuturikirwa zvisizvo nevakuru veApple munharaunda yeGerman avo Cook vakataura navo, asi chero zvakadaro nhau dziripo uye hatitende kuti Cook aida kutaura kuti ari kuenda kumahombekombe neWatch.
Isu tinopokana kuti mukuru akanaka Cook haazive mabatiro ewachi yake sezvayakakodzera, saka isu tinofungidzira kuti zvese izvi idudziro isiri iyo uye Apple Watch inokwanisa kumira nemvura asi kwete kuendesa kugungwa. Zvisinei hazvo pane zvishoma zvasara kuona Ndeupi rudzi rweIP chitupa iyo ino kupfeka inotakura? kubva kuApple. Izvo zvine chokwadi ndechekuti kutora wachi iyi kuenda kumahombekombe kunogona kuve chinhu chakajairika muhupenyu hwevashandisi vazhinji, saka kuwedzera chitupa chakakodzera chingave chinonakidza.
Kugeza mumba kana kushambidza maoko ne wachi yako pane chimwe chinhu chinoitwa nevashandisi vazhinji uye ndizvo zvakaitwa naCook kuenda pamudyandigere. Kubva pane zvatinoziva, hapana mukuru wehurumende akambotaura nezvechitupa chekuti wachi iyi ichave nayo, chimwe chinhu chingangodaro chakagadziridzwa mumwedzi iyi kubvira payakapihwa, kubva kuApple unogona kutarisira chero chinhu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo isina mvura Apple Watch?
Radium yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.1
Yekupedzisira Cheka Pro X muvhi bhaisikopo raWill Smith